Mmejuputa atumatu icho ahia bu uzo di nma nke na-akpali gi ka i kwaga ozo. Ọ bụrụ na ị nwere sọftụwia ma ọ bụ usoro dị ugbu a ịchọrọ ịgbakwunye oyi akwa nke egwuregwu na ị nweghị oge ịnwe ndị otu mmepe gị ka ha rụpụta azịza zuru oke, mgbe ahụ Playoff na-enye ngwa ngwa, nke ọzọ dị mma. Playoff bụ usoro iwu dị ike nke nwere ike ịjikọta n'ụzọ dị mfe site na SDK API n'ime nke ọ bụla
Ndị mmadụ masịrị m. Nye ha a kediegwu ahịa ozi na a ego na ha ga-apụ ... ma-ekwe ka ha ohere iji merie baajị na ha profaịlụ na peeji nke na ha ga-alụ ọgụ maka ya. Ana m eme onwe m ọchị ka m na-enwe nkụda mmụọ mgbe m nwụsịrị n'ọchịchị na Foursquare - ọ bụ ihe nzuzu. Nke ahụ bụ ihe gamification na-adabere. Gịnị kpatara ịgba chaa chaa ji arụ ọrụ? Gamification na-arụ ọrụ iji mejuo ụfọdụ ọchịchọ mmadụ kacha mkpa: mmata na ụgwọ ọrụ,